Akhriso: Booqashada Farmaajo Ee Turkiga Iyo Hehiisyada Taariikhiga Ah Ee lakala saxiixday | Xaqiiqonews
Akhriso: Booqashada Farmaajo Ee Turkiga Iyo Hehiisyada Taariikhiga Ah Ee lakala saxiixday
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa haatan booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Turkiga.
Warar hor-u-dhac ah ayaa sheegaya in wasiirka hor-u-marinta Turkiga Lutfi Alwan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yusuf Garaad ay heshiis ku kala saxiixdeen arrimaha hor-u-marinta iyo heshiis ku saabsan dhismaha xarumo dhaqan.
Dalka Turkiga waxaa uu sidoo kale ballan-qaaday in Soomaaliya keeni doono bisha Ramadaan 15 Kun Oo Tan oo raashin iyo dawo ah.
Madaxweynaha Soomaaliya oo arbacadii kulan la qaatay dhiggiisa Turkiga Rajeb Tayib Erdogan waxaa uu ku casuumay in uu soo booqdo Soomaaliya, waxaa kaloo wafdiga Soomaalida ay la kulmeen wasiirka beeraha iyo xoolaha Farouk Glick, wasiirka hor-u-marinya Lutfi Alwan, xogahayaha guud ee madaxtooyada Fakhri Kaserga iyo ku-xigeenkiisa ahna afhayeenka Ibrahim Kalan.
Wafdiga Soomaalida ayaa lagu wadaa in ay maanta sii wadaan heshiisyada ay la galayaan dhiggooda Turkiga, iyada oo laga yaabo in beeraha ay ka mid noqdaan heshiisyada la galaayo.
Dalka Turkiga, waxaa uu mashaariic badan ka fuliyaa Soomaaliya, waana dal ay Soomaalida ku tilmaamaan in uu indhaha caalamka ku soo jeediyay Soomaaliya.
August 19, 2011: Xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waxaa uu si fiican u soo ifbaxay kadib imaashiyahii ra’isulwasaaraha Turkiga Rajeb Tayib Erdogan ee Soomaaliya 19-kii Agoosto 2011-kii, si wax looga qabto baahi iyo abaarro ka jiray, wixii maalintaas ka dambeeyay wax walbo waa is badaleen.
Booqashada Erdogan kadib, shirkadaha gaarka ah iyo dadweynaha Turkiga waxa ay Soomaaliya u ururiyeen kaalmo gaareysa $360 Malyuun oo doolar , Hey’adda Bisha Cas ayaa 3 sano gudahood dalka keentay wax ka badan 10 markab oo mucaawino ah.
Hadaba, Halkan Hoose Ka Akhriso Mashaariicda Turkiga Ee Soomaaliya:
Isbitaalka Erdogan: Mashruuca ugu weynaa ee xagga caafimaadka ee Turkida ay ka fuliyeen Soomaaliya waa isbitaalka Digfeer , waxaa ku baxday wax ka badan 30 malyuun oo doolar oo qarash ah mashruucani isbitaalka Digfeer oo markii dambe loo bixiyay Erdogan, waxaa kaloo jira xarunta Deva iyo xarumo kale oo Muqdisho ku leeyihiin.
Dhaawacyo: Turkiga waxa ay gargaar caafimaad oo aan kala joogsi lahayn u fidiyaan mas’uuliyiinta iyo muwaadhiniinta Soomaaliyeed ee ku waxyeelooba weerarada iyo qaraxyada dalka ka dhaca, kuwaasi oo gudaha dalka wax looga qaban waayay xaaladooda caafimaad. Hey’ad Turki ayaa waxa ay dhiseysaa isbitaal weyn oo carruurta kaliya ah.
Luqadda Turkiga: illaa 1000 arday oo Soomaali ayaa iyaguna dalka Turkiga lagu soo siiyey tabobar xagga Luqada Turkiga ah kuwaasi oo inta dalka dib ugu soo laabtay maanta dhamaantood u shaqeeya hey’adaha Turkiga, iyaga oo turjumaano u ah , islamarkaasina ku shaqeeya mushaaraad wanaagsan oo qoysas badan ka aflaxeen.
Mashaariicda Waaweyn ee uu Turkiga Ka Qabtay Dalka:
Xiriirka Dublamaasiyadeed iyo Heshiisyada:
Dalka Turkiga waxa ay safaarad ka furteen magaalada Muqdisho, wuxuuna Turkiga noqdey dalkii ugu horeeyey ee aana Afrikaan ahayn ee safaarad ka furta Soomaaliya muddo 20 sano ah oo dalka burbur ku jirey, safaaradani waxaa la furey 1-dii bishii November, 2011-ka, waxaana xiligaasi safiir loo soo magacaabay Danjire Kani Torun
Heshiisyo Ciidamo: Soomaaliya iyo Turkiga waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo u badan xagga ciidamada, heshiiskii ugu horeeyey oo xagga ciidamada waxaa qalinka lagu duugey bishii May sanadii 2010-kii, waxaa heshiiskaasi fulintiisa loo dhaqaaqay bishii Nifeembar 2012-kii, heshiiska ayaa waxa uu ku saabsanyahay iskaashi military oo labada dal dhexmara, sida tabobar ciidamada kala duwan ee Soomaaliya kuwa cirka, kuwa badda, iyo kuwa dhulkaba, waxaa kale oo heshiiska uu dhigayay in kaalmo military uu Turkiga siiyo Soomaaliya
Mataaneynta Muqdisho iyo Istanbul: Horaantii sanadkii 2013-kii ayaa waxaa la saxiixey heshiis lagu mataanaynayay magaalada Muqdisho iyo Magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn Turkiga, mataaneynta waxa ka dhashay mashaariic kala duwan gaar ahaan dhanka nadaafadda, iyada oo dowladda hoosee ee Istanbul ay tan magaalada Muqdisho ugu deeqdey gaadiid qashinka qaada iyo agab kale oo nadaafadeed iyo waliba bilic soo celinta magaalada Muqdisho.
January 25, 2015: Madaxweynaha Dalka Turkiga Rajab Dayib Erdugan, iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa soo gabagabeeyay booqasho hal maalin ah oo ay ku yimaadeen Soomaaliya.
Tababarka Ciidanka Booliiska
Iskaashi Dhexmara SONNA iyo Wakaaladda wararka Turkiga
Heshiisyo ku saabsan shaqada iyo shaqaalah
April 25, 2017: Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa booqasho ku tagay dalka Turkiga, booqashada